Zinedine Zidane Oo Koox Dhibtoonaysa Oo Premier League Ka Tirsan Xaalada Ku Sii Xumayn Doona Iyo Xidiga Uu Bisha January La Soo Saxiixan Doono. - Gool24.Net
Zinedine Zidane Oo Koox Dhibtoonaysa Oo Premier League Ka Tirsan Xaalada Ku Sii Xumayn Doona Iyo Xidiga Uu Bisha January La Soo Saxiixan Doono.
Zinedine Zidane ayaan suuqii xagaaga helin laba xidig oo ka mid ahaa kuwii uu doonayay in uu kooxdiisa ku soo xoojiyo waxayna kala ahaayeen Pual Pogba iyo Christian Eriksen waxaana la filayaa in Zidane uu suuqa bisha January la soo saxiixan doonoEriksen.
Dhibaatada ay Tottenham xili ciyaareedkan ku jirto ayaa Real Madrid si buuxda uga caawin karta in ay qiimo aad u hooseeya ku heli karto saxiixa xidiga uu Florentino Perez waqtiga badan doonayay ee Christian Eriksen.
Tottenham ayaa waqti xaadirkan ku dhibtoonaysa Premier league waxayna sidoo kale ceeb kala kulmeen Bayern Munich kulankii Champions League.
Waxa uu Christian Eriksen tan iyo sanadkii hore uu diidanaa in uu heshiis cusub u saxiixo Tottenham laakiin hadda waxa uu ku jiraa bilihii ugu danbeeyay heshiiskiisa Tottenham.
Wargayska Sport ayaa shaaciyay in Real Madrid ay bisha January la soo saxiixan doonto Christian Eriksen kadib markii ay xaalada Pual Pogba adkaatay waxayna sidoo kale Madrid ka faa’iidaysan kartaa xaalada Tottenham iyo in Eriksen uu diiday in uu heshiis cusub saxiixo.
Tottenham ayaa bisha January kala go’aansan doonta laba arimood oo kala daran, waxayna qaadan karaan go’aanka ay Christian Eriksen ku sii haysan doonaan ilaa dhamaadka xili ciyaareedka balse waa in ay huraan in uu si xor ah ugu biiri doono kooxda uu doonayo.
Laakiin waxay sidoo kale Tottenham haysataa fursada ay suuqa january lacag kaga samayn karto saxiixa Christian Eriksen kaas oo sidoo kale lala xidhiidhinayay Man United.
Wargayska The Sun ayaa sheegay in ugu dhawaan ay Real Madrid bisha January la wareegi doonto Christian Eriksen kaas oo hadda u muuqda in uu ka bixi doono Spurs oo xaalad adag ku jira.
Zidane ayaa haddaba kooxdiisa khadka dhexe waxaa uga ciyaara Kroos, Modric, Casemiro, Isco iyo xidiga saamaynta badan yeeshay ee Valverde balse qiimaha ay Madrid ku heli karto Christian Eriksen ayaa ah mid Perez ku qasbi doona in uu heshiiskan dhamaystiro.